संघ – Page 784 – Halkaro
अामाको क्रिया बस्दै शान्ति
काठमाडौँ, पुस १ । काठमाडौं कोटेश्‍वरकी शान्ति श्रेष्‍ठ आफ्नो आमाको क्रियापुत्री बसिरहनु भएको छ । ८६ वर्षकी आमाको गत साता निधन भएपछि ६५ वर्षिया शान्ति आफ्नै घरमा क्रियापुत्री बस्‍नु भएको हो । लामो समय आमाको रेखदेख आफैं गरेको र दाजुभाइ नभएकाले पनि आफैंले दागबत्तीसमेत दिएको शान्तिले बताइन् । आमाको निधन भएको अाज ११ दिन भएको […]
बाबु-हजुरबुबाबाट बलात्कृत चेली ११ कक्षामा विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण
प्रकाशित मिति : २०७३, १ पुस शुक्रबार December 17, 2016
काठमाडौँ, पुस १ । आफ्नै बूबा र हजुरबुबा बाट बलात्कृत चेली ११ कक्षामा बिषिस्ट श्रेणीमा उतीर्ण भएकी छन् । २०७१ सालको भाद्र महिनाको बूबा खुवाउने औंसीको दिन एउटा समाचार बाहिर आयो – ९ बर्षको उमेरमा आफ्नै हजुरबुवा बाट बलात्कृत भएकी सुनीतालाई 12 बर्षको उमेरदेखि आफ्नै बाबुले पनि बलात्कार गर्दै आएका थिए । त्यसको पीड़ा सहन […]
संशोधनको विरोध पाल्पा बन्द
पाल्पा, पुस १ । संविधान संशोधन विधेयकको विरोधमा पाल्पा बन्द भएको छ । विधेयकमा पाल्पासहितका पहाडि जिल्लालार्इ पाँच नं. प्रदेशबाट अलग गरेको विरोधमा त्यहाँका स्थानीय दलले दुइ दिन जिल्ला बन्द गरेका हुन् । बन्दका कारण आज बिहानदेखि यहाँको जनजीवन प्रभावित भएको छ । २४ घन्टे आमहडताल कारण आज बिहानैदेखि सवारीसाधन, शौक्षिक संस्था, पसल खुल्न सकेका […]
धादिङमा दुर्घटना तीन जनाको ज्यान गयो
काठमाडौँ, पुस १ । दक्षिण धादिङबाट पुथ्वीराजमार्गमा ओर्लन लागेका स्कारपियो जीप दुर्घटना हुँदा तीन जनाको ज्यान गएको छ । कच्ची सडकबाट पृथ्वी राजमार्गमा ओर्लंदै गरेको ग २ च ४५ ७२ नम्बरको जीप शुक्रबार बिहान दुर्घटनामा भएको हो । वैरेनी प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा लमजुङ गाउँशहर–६ निवासी २५ वर्षीय माधव धिताल , वेंसीशहर १४ निवासी ३१ वर्षीय […]
चितवन, पुस १ । चितवन प्रहरीले एक जनालाई लागु औषधसहित पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले भरतपुर १३ बाट बा ५७ प ५०८५ नं. मोटरसाइकलको सहित चितवन भरतपुर २६ का सञ्जिब महतोलाई प्रहरीले लागु औषधसहित पक्राउ गरेको हो । उनीसँगबाट प्रहरीले लागु औषध डाईजेपाम १८ एम्पुल, ब्रुफिनर्फिन १८ एम्पुल र फेनारगन १८ एम्पुल बरामद गरेको छ […]
मुग्लिन नारायणगढ सडक खण्ड फेरी दैनिक चार घण्टा अवरुद्ध हुने
चितवन, पुस १ । चितवनको नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड फेरी दैनिक ४ घण्टा बन्द हुने भएको छ । यही पुस ७ गतेदेखि लागु हुनेगरि विहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म सडक खण्ड बन्द हुने नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले आज एक सूचना जारी गर्दै दैनिक चार घण्टा सडक खण्ड बन्दगरि निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिईने […]
संशोधनको विरोधमा सिठ्ठी जुलुस
चितवन । सिमाकंन हेरफेरको प्रस्ताव विरुद्ध चितवनमा एमाले भातृ संगठनले आज सिठ्ठी जुलुस निकालेको छ । एमालेका युवा र विद्यार्थी संगठनहरुले भरतपुरमा जुलुस सहित प्रदर्शन गर्दै सिमाकंन हेरफेरको प्रस्तावको विरोध गरेका हुन् । आज बिहान भरतपुरको चौबिसकोठीबाट जुलुस निस्किएर अस्पताल रोड, मालपोत चोक, हुलाक चोक हुंदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर जुलुसको समापन भएको थियो । […]
संशोधन प्रस्ताव असफल गराउन सांसदलार्इ खबरादी एसएमएस
काठमाडौँ । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको युवा तथा विद्यार्थी संगठनसहितका विपक्षी दलका विद्यार्थीहरूले सांसदलार्इ खबरदारी गर्दै एसएमएस पठाउने भएका छन् । प्रस्तावलार्इ असफल गराउने एमाले लगायत विपक्षी दलका भातृ संगठनहरुले नयाँ तरिका अपनाएका हुन् । उनीहरुले सबै सांसदको मोबाइलमा एसएमएसको ‘एलर्ट टोन’ बजाएर खबरदारी गर्ने निर्णय […]
पुरानै संरचनालार्इ गाँउ पालिका र नगरपालिका बनाए निर्वाचन हुन्छः देउवा
चितवन, ३० मङ्सिर । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गाउँ विकास समितिलाई गाउँपालिका बनाएर अहिलेकै संरचनामा निर्वाचन हुने बताएका छन्र । त्यसका लागि प्रमुख तीन दलबीच सहमति भएको उनको भनाइ थियो । नेपाली काँग्रेस चितवनको सङ्गठन सुदृढिकरण एवम् जागरण अभियान २०७३ को आज यहाँ उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले संविधान कार्यान्वयन गराउन तीन तहको निर्वाचन हुनैपर्ने […]